နျူကလိယ၌ DeltaFosB ၏အလွန်အကျွံထုတ်ဖော်မှုသည်အကာအကွယ်စွဲမှု၏ထူးခြားသောလက္ခဏာကိုတုပသည်၊
တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2014; 8: 297 ။
သြဂုတ် 29, 2014 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fnbeh.2014.00297
Yafang Zhang က,1 အဲလစ်ဇဘက်ဂျေ Crofton,1 Dingge လီ,1 မာရိသညျကေး Lobo,2 Xiuzhen ဝါသနာရှင်,1 အဲရစ်ဂျေ Nestler,3 နှင့် သောမတ်စ်အေအစိမ်းရောင်1,*
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်ကြွက်များတွင်အကာအကွယ်စွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ phenotypes ထုတ်လုပ်။ ΔFosBဦးနှောက်အတွက်ဆုလာဘ်ထိန်းညှိခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင်သောကူးယူအချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏အကာအကွယ် phenotypes အတွက်ΔFosBနေဖြင့်ကစားအခန်းကဏ္ဍကိုကောင်းစွာလေ့လာခဲ့ရသေးပါ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ΔFosB differential ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ကင်းတုံ့ပြန်တစ်ခုကြွယ်ဝပြည့်စုံအခြေအနေ (EC) တွင်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးအထီးကျန်အခြေအနေ (IC) တွင်မွေးကြွက်များတွင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ကြောင့် EC အအခြေအနေများအောက်တွင်မြင်ကြΔFosBတစ်ခုပြီးသားမွငျ့မား Basal စုဆောင်းခြင်းမှ IC ကြွက်၏, ဒါပေမယ့်မရ EC ကြွက်များ၏နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်နာတာရှည်ကင်းကုသမှုစီနျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်း elevates (NAc).
pair တစုံ-သျောကြွက်များ၏ NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB၏ viral-mediated overexpression (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင် / အထီးကျန်ဆိုလိုသည်မှာလွတ်လပ်သော) ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်သည့်အခါ sucrose များအတွက်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာတိုးပွါး, ဒါပေမယ့် satiated တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တုံ့ပြန်လျော့နည်းစေပါသည်။ ထိုမှတပါး, ΔFosB overexpression, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းကင်းရှာ၏မျိုးသုဉ်းပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement လျော့ကျ; အဆိုပါသန့်စင် phenotype နှင့်အတူတသမတ်တည်းအားလုံးအမူအကျင့်တွေ့ရှိချက်.
ဆနျ့ကငျြ, သို့သော်, ΔFosB overexpression anxiety- နှင့်စိတ်ကျရောဂါ-related အပြုအမူအတော်ကြာစမ်းသပ်မှုအတွက်တစ်စုံ-သျောကြွက်များ၏တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါဘူး။
ထဲမှာထို့ကြောင့်ΔFosB NAc shell ကိုတု ကာကွယ်စွဲ phenotype မဟုတ်ဘဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏အကာအကွယ်စိတ်ကျရောဂါ phenotype ။
keywords: FosB, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်, စိတ်ကျရောဂါ, ကိုကင်းမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေး, adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (AAV), overexpression
အထူးသဖြင့်အသက်တာ၏အစောပိုင်းအဆင့်ဘဝအတှေ့အကွုံ, ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတိရိစ္ဆာန်များ၏အမူအကျင့်အပေါ်တစ်ဦးလေးနက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် Elisei et al (လူသားတွေအတွက်စိတ်ရောဂါဖို့အားနည်းချက်များနှင့်ခုခံရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ , 2013; Akdeniz et al ။ , 2014; Kato နှင့် Iwamoto, 2014; ဗန် Winkel et al ။ , 2014). ကြွက်မော်ဒယ်များခုနှစ်တွင်လူငယ်လူကြီးတဆင့်နို့တစ်ဦးထံမှကြွယ်ဝစေပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်အကာအကွယ်စွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ phenotypes ထုတ်လုပ်ရန်အစီရင်ခံခဲ့သည် (အစိမ်းရောင် et al ။ , 2002, 2003, 2010; Laviola et al ။ , 2008; Solinas et al ။ , 2008, 2009; အယ်လ် Rawas et al ။ , 2009; သီရဲလ် et al ။ , 2009, 2010) ။ ဒီပါရာဒိုင်းမှာတော့တိရိစ္ဆာန်များတိရိစ္ဆာန်များအုပ်စုတစ်စု-သျောဖြစ်ကြပြီးဝတ္ထုတ္ထုမှနေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်, ဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုအသစ်အဆန်းသို့မဟုတ်လူမှုရေးအဆက်အသွယ်မရှိဘဲတစ်ခုတည်းသောသျောထားတဲ့အတွက်သီးခြားအခြေအနေ (IC) ရှိသည်သောအတွက်သန့်စင်အခြေအနေ (EC) ဖြစ်စေဖို့တာဝန်ရှိပါသည်။ လူမှုရေးအဆက်အသွယ်, လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အသစ်အဆန်းလည်းပါဝင်သည်သောသန့်စင်အခြေအနေထဲမှာမွေးတိရစ္ဆာန်များ, ပြပွဲလျော့နည်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့်သွေးကြောသွင်းမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးပါရာဒိုင်းအတွက်ကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး၏ရှာကြံ (အစိမ်းရောင် et al ။ , 2002, 2010). အဆိုပါစွဲ phenotype အပြင်, သန့်စင်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောထိတွေ့စိတ်ကျရောဂါ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လက္ခဏာတူသောအကျိုးသက်ရောက်ထုတ်လုပ် (အစိမ်းရောင် et al ။ , 2010; Jha et al ။ , 2011) ။ အထူးကြွယ်ဝပြည့်စုံတိရိစ္ဆာန်များပြပွဲဟာ sucrose preference ကိုစမ်းသပ်နေတဲ့လူမှုရေးအပြန်အလှန်စမ်းသပ်မှုအတွက်လျော့နည်းလူမှုရေးရုပ်သိမ်းရေး, နှင့်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှု (FST) တွင်လျော့နည်း immobility အတွက် anhedonia ကဲ့သို့သောအပြုအမူလျော့နည်းသွားသည်။ သန့်စင်၏ Anti-စွဲနှင့်လက္ခဏာတူသောသက်ရောက်မှုရှိနေသော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုတင်သုတေသနပြုကူးယူအချက်၏လျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးဖြစ်သော်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ဤအကာအကွယ် phenotypes အခြေခံသည့်ယန္တရားများ, မလုံလောက်မှု, နားလည်သဘောပေါက်ရှိနေဆဲ, CREB သည်နျူကလိယ accumbens အတွက် (NAc ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏သက်ရောက်မှုအချို့ဖြန်ဖြေအတွက် (အစိမ်းရောင် et al ။ , 2010; Larson et al ။ , 2011) ။ ထို့ကြောင့်ဤ differential ကိုမွေးမြူလေ့လာမှုများ၏ရည်မှန်းချက်နောက်ပိုင်းတွင်ဆေးခန်းမှဘာသာပြန်နိုင်ခံနိုင်ရည်၏မော်လီကျူးယန္တရားများကိုသိရှိနိုင်ဖို့အခြေခံသိပ္ပံချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်မွေးမြူရေး (McBride et al အဖြစ်ကောင်းစွာထူထောင်မျိုးရိုးဗီဇမဟာဗျူဟာဖို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ညီမျှသည်။ , 2014).
ဤတွင်ကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုအချို့ပုံစံများဖြင့်သို့မဟုတ်ကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်, အရက်, နီကိုတင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေး (မျှော်လင့် et al အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုနီးပါးအားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများက NAc အတွက်အဓိကသွေးဆောင်သောအခြားကူးယူအချက်, ΔFosBအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ , 1992; Kelz နှင့် Nestler, 2000; Perrotti et al ။ , 2004, 2008) ။ တစ်ဦးကူးယူအချက်အဖြစ်, ΔFosBသည်၎င်း၏ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏ကူးယူမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်ဖိနှိပ်ဖို့ AP-1 တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်ဖို့ချည်နှောင်ထားတဲ့တက်ကြွ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော (Nestler, ဖွဲ့စည်းရန်, JunD ဦးစား, ဇွန်မိသားစုပရိုတိန်းနှင့်အတူ dimerizes 2001), ပေမယ့်သစ်ကိုသုတေသနပြုΔFosBကိုလည်း homodimer (ဝမ် et al အဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသောအကြံပြုထားသည်။ , 2012) ။ အဆိုပါΔFosBပရိုတိန်း၏တစ်ဦးခြင်းကို splice ကှဲလှဲဖြစ်ပါသည် FosB FosB အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအ Fos-မိသားစုပရိုတိန်းနှင့်အတူမြင်ကြလျင်မြန်စွာပျက်စီးခြင်းကနေΔFosBပရိုတိန်းတားဆီးနှစ်ခုကို C-terminal ကို degron domains များကင်းမဲ့ဖို့ΔFosBပရိုတိန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ပေးသောဗီဇ။ ΔFosBအဆိုပါ NAc အတွက်အလွန့်အလွန်တည်ငြိမ်သောကွောငျ့, ΔFosBသည်အခြား Fos ပရိုတိန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နာတာရှည်လှုံ့ဆော်မှု vs. စူးရှတုံ့ပြန်အတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားဆောင်ရွက်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုΔFosBပရိုတိန်း၏မူးယစ်ဆေးဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ FosB နှင့်အခြား Fos ပရိုတိန်းတစ်ခုသာတိုတောင်းသောအချိန်များအတွက်သွေးဆောင်နေစဉ်တဖြည်းဖြည်းရက်သတ္တပတ်မှနေ့ရက်ကာလအဘို့စုဆောင်းနှင့်ဆက်ရှိနေသေး (နာရီ) နှင့်နောက်ဆက်တွဲထိတွေ့မှု (Nestler et al အပေါ်သို့တစ်ဦး attenuation သော induction ဖွံ့ဖြိုး။ , 2001; Nestler, 2008).
ΔFosB၏အရေးပါမှုကြောင့်အလွန်အမင်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင်ကြောင်းသာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဦးနှောက်ထဲမှာΔFosB၏ခြယ်လှယ်တိရိစ္ဆာန်များ၏အမူအကျင့်ကိုထိခိုက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ selection အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် dynorphin အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ΔFosB inducing locomotor စူးရှနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းတုံ့ပြန် sensitivity ကို, အဖြစ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပါရာဒိုင်းအတွက် conditional ရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းနှင့်အားဖြည့်အတွက်ကိုကင်းဖို့ကြိုးတုံ့ပြန်မှုတိုးပွါး (Kelz et al ။ , 1999; Kelz နှင့် Nestler, 2000; Colby et al ။ , 2003).
ကာကွယ်စွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ phenotypes သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ကြွက်အဘို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားခဲ့ကြပေမယ့်အဲဒီအကာအကွယ် phenotypes ဖြန်ဖြေအတွက်ΔFosBတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအပြည့်အဝအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏ယခင်လေ့လာမှုများစံပတ်ဝန်းကျင် (SE) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးသန့်စင်ပတ်ဝန်းကျင်ကြွက်တွေမှာ striatal ဒေသနှစ်ခုလုံး D1 နှင့် D2 အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် Basal ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုးပွါး, ထိုပြသ (Solinas et al ။ , 2009; Lobo et al ။ , 2013). ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကြွယ်ဝပြည့်စုံ Wistar ကြွက်နီကိုတင်းဖို့အကာအကွယ်စွဲ phenotype အတွက်ΔFosBတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, အရှေ့တောင်ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ NAc နှင့် prefrontal cortex အတွက်မြင့်မားသောΔFosBအပြုသဘောဆဲလ်တွေပြသ (Venebra-Muñoz et al ။ , 2014). ထို့အပြင်ကြွက်များ၏ striatum တစ်လျှောက်လုံးΔFosB overexpressing တစ်ခုသန့်စင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြွက်များ၏တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုအလားတူဖြစ်ရသောနေ့စဉ်ဘီးပြေး, တိုးပွါး (Werme et al ။ , 2002).
(1) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်သည့် NAc အတွက် Basal ΔFosBအဆင့်ဆင့်၏စုဆောင်းခြင်းကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း, လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတော့ကျွန်တော်တွေးဆ နှင့် (2) ΔFosB၏ဤစုဆောင်းခြင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏အကာအကွယ်သက်ရောက်မှုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ဘို့, အထီး Sprague-Dawley ကြွက် (Harlan, ဟူစတန်, တက္ကဆပ်, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ကျပန်းနေ့က 21 မှ postnatal နေ့က 51 ထံမှ EC သို့မဟုတ် IC အိမ်ရာတစ်ခုခုကိုမှတာဝန်ကျတယ်။ EC ကြွက်အုပ်စုတစ်စု-သျော (လှောင်အိမ်နှုန်း 20) ကြီးမားသောသတ္တုလှောင်အိမ်ထဲမှာ (70 × 70 × 70 စင်တီမီတာ) (စသည်တို့ကိုသားသမီးရဲ့ကစားစရာပလတ်စတစ်ကွန်တိန်နာ, PVC ပြွန်,) အများအပြားခက်ခဲပလပ်စတစ်တ္ထုနှင့်အတူရှိကြ၏။ ဤရွေ့ကားတ္ထုသစ်ကိုအရာဝတ္ထုတွေနဲ့အစားထိုးပြီးဝတ္ထု configuration ကိုနေ့စဉ်သို့ကျန်နေသေးခဲ့ကြသည်။ IC ကြွက် singly စံ polycarbonate လှောင်အိမ်၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ဟာစမ်းသပ်ချက်တစ်လျှောက်လုံးဤအခြေအနေများအတွက်ကျန်ရစ်အပေါင်းတို့နှင့်အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးစမ်းသပ်မှုအသက် 51 ရက်ပေါင်း (သန့်စင် / အထီးကျန်ဆိုလိုသည်မှာအနည်းဆုံး 30 ရက်) အပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ΔFosB၏ overexpression အဘို့, အထီး Sprague-Dawley ကြွက် (Harlan, ဟူစတန်, တက္ကဆပ်, USA) ရဲ့အရွယ်အစား 225-250 ဂရမ်မှာရရှိသောခဲ့ကြသည်နှင့်အ stereotactically တစ်ခု adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို (AAV2) နဲ့ထိုးသွင်းမခံရမီစံ polycarbonate လှောင်အိမ်ထဲမှာ pair တစုံ-သျော အစိမ်းရောင်အချောင်းပရိုတိန်း (GFP) နဲ့ΔFosB overexpressing တစ်ခုသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ပဲ GFP (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။ စံကြွက် Chow နဲ့ရေအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုနှင့်အစားအစာစည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်း မှလွဲ. အားလုံးကြွက်မှလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကြွက်တစ်ဦးထိန်းချုပ်ထားပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် (; ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ, 22%; အပူချိန်, 50 ° C နဲ့ 12 ဇအပေါ် 600 ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ, အလင်းအိမ်) ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုတစ်ခုအစည်းအရုံးအတွက် (AAALAC) ကိုလိုနီအတည်ပြု ။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက် NIH လမ်းညွှန်နှင့်တက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီတညီတည်း။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်အသစ်အဆန်း, လူမှုရေးအဆက်အသွယ်များနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်သောဒြပ်ပေါင်းကိုင်တွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Pair ကိုအိုးအိမ်လူမှုရေးအဆက်အသွယ်ပေးပါသည်ထို့ကြောင့်တစ်ဦး EC (NIH လမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့်အသစ်အဆန်း, လူမှုရေးအဆက်အသွယ်များနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အခွအေနေများအတွက်သင့်လျော်သောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုတစ်အသစ်အဆန်းမရှိဘဲအုပ်စု, လူမှုရေးအဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းသည် IC အခွအေနေပါလိမ့်မယ်။ IC ကြွက် EC အကြွက်များထက်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးလာဆိုင်းဘုတ်များပြသပါ။ အထူးသ EC အကြွက်များ adrenals (Mlynarik et al ကျယ်ဝန်းကြ။ , 2004), လှေကား et al (CORT တုံ့ပြန်မှုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ , 2011), ချက်ချင်း-အစောပိုင်းဗီဇသော induction (Zhang က et al ။ , ပြင်ဆင်မှုအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်) နှင့်ΔFosBစုဆောင်းခြင်း (Solinas et al attenuated ။ , 2009; Lobo et al ။ , 2013), နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု (Crofton et al ။ , ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်အပေါငျးတို့သဆိုင်းဘုတ်များ) ။
(ထပ်ခါတလဲလဲ) 60 နေ့က (စူးရှ) သို့မဟုတ် 1 ရက်ပေါင်းဖြစ်စေဘို့9မိဘို့ (DecapiCone®, Braintree သိပ္ပံ Inc က MA, USA) ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းနှင့်အထီးကျန်ကြွက်တစ်ခါသုံးပျော့ပလပ်စတစ်ကြွက်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းသို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ 30 ကြွက် (အုပ်စုတစ်စုနှုန်း5ကြွက်များ) ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု၏နောက်ဆုံးကာလ၏အစအပြီး 30 မိခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ကြတာတိုထိတွေ့ mRNA စမ်းသပ်မှုများအတွက်, ကြွက်ဦးနှောက်ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်နှင့် NAc mRNA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ခွဲဖြာခဲ့သည်။ 12 ကြွက်ဆားနှင့် 4% paraformaldehyde နှင့်အတူ perfused ခဲ့ကြသည် immunohistochemistry အဘို့, ဦးနှောက် 4% paraformaldehyde အတွက် Post-fixed နှင့် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 1xPBS အတွက် 4% က glycerol ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့, ဖြည်။ ကြွက်ဦးနှောက်တစ်ခဲ microtome နှင့်အတူ 40 μmမှာလိုက်သည်ကိုခံခဲ့ရသည်။ ဦးနှောက် (Perrotti et al နိမ်မှအပြည့်အဝ-အရှည် FosB ပရိုတိန်းခွင့်ပြုရန်နောက်ဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက် 24 ဇရိတ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ , 2008).
ကြွက် ketamine (100 / ကီလိုဂရမ် IP ကို ​​mg) နှင့် xylazine သုံးပြီး anesthetized ခဲ့ကြသည် (10 / ကီလိုဂရမ် IP ကို ​​mg) နှင့်တစ်ဦး Silastic ပြွန်တိရစ္ဆာန်ရဲ့နောက်ကျောအပေါ်အရေပြားကိုမထွက်ခြင်း, jugular သွေးကြောထဲမှာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လုံခြုံခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနေ့ပြွန်ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကြာချိန်တစ်လျှောက်လုံးပြွန် patency ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ 0.1 heparin (30.0 ဦး / ml), penicillin G ကိုပိုတက်စီယမ် (250,000 ဦး / ml) င်တစ်ဦးမြုံဆားဖြေရှင်းချက်၏ ml နှင့် streptokinase (8000 IU သည် / ml) နဲ့ထုံမွှန်းခဲ့ကြ စမ်းသပ်ချက်များ။
နှစ်ဆယ်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းနှင့် 20 အထီးကျန်ကြွက်အော်ပရေတာအခန်း 30 × 24 × 21 စင်တီမီတာ (Med-Associates မှ, စိန့် Albans, VT) နေရာချခြင်းနှင့်ကင်းတာဟာများအတွက်လီဗာကိုနှိပ်ခွင့်ပြုခဲ့သည် (0.5 / ကီလိုဂရမ် / ပြုတ်ရည်, NIDA မူးယစ်ဆေးထောက်ပံ့ရေး MG သုတေသနတြိဂံ Institute မှ, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, အမေရိကန်နိုင်ငံ) သို့မဟုတ်ဆား 1 ရက်ပေါင်းစုစုပေါင်းများအတွက်တစ်နေ့လျှင် 1 ဇများအတွက် fixed အချိုး2(FR14) အချိန်ဇယားကိုအောက်မှာ။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုနှင့် IC အုပ်စုများအကြားအလားတူကင်းစားသုံးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ session တစ်ခုနှုန်း 30 တာဟာဦးရေအများဆုံးရှိ၏။ တစ်ရှူးအပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည် 30 နမူနာရန်ကန့်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုတစ်စုကနေနိမ့်ဆုံး-တုံ့ပြန်ကြွက်ဆားအုပ်စုများကိုကင်းနှင့်အ 8 များအတွက်7၏ NS ထွက်ခွာလုပ်ငန်းများ၌မခံခဲ့ရပါ။ ထို့ကြောင့် EC များနှင့် IC ကြွက်အကြားတာဟာစုစုပေါင်းကင်းစားသုံးမှုသို့မဟုတ် timecourse မ EC / IC ကွဲပြားမှုရှိကြ၏။ ကြွက်ဦးနှောက်ကနောက်ဆုံး Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခု၏အစအပြီး3ဇထုတ်ယူခဲ့ကြသည်နှင့် NAc mRNA နှင့်ပရိုတိန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ခွဲဖြာခဲ့သည်။ အဆိုပါ NAc တစ်ခုမှာဘက်အနောက်တိုင်းချေ, qPCR များအတွက်အသုံးပြုသည်အခြားဘက်ခြမ်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ယခင်ကထုတ်ဝေစာပေ (မျှော်လင့် et al တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်။ , 1994; ချန် et al ။ , 1995), EC (N = 12) နှင့် IC ကြွက် (N = 12) ဆားနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ် 20 (စူးရှ) သို့မဟုတ် 1 ရက်ပေါင်း (ထပ်ခါတလဲလဲ)9နေ့အဘို့ (IP) intraperitoneally / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း MG ။ တဦးတည်း EC အနမူနာအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးကြွက်ထိုး၏တူညီသောအရေအတွက်အားလက်ခံရရှိကြောင်းဒါကြောင့်စူးရှသောအုပ်စုသည်တစ်နေ့လျှင် 8 အပေါ်9နေ့ရက်ကာလအဘို့ဆား၏ထိုးခြင်းနှင့်ကိုကင်းများ၏တဦးတည်းထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဦးနှောက်ကနောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 30 မိထုတ်ယူနှင့် NAc mRNA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ခွဲဖြာခဲ့ကြသည်။
qPCR သုံးပြီး mRNA ၏အရေအတွက်
အဆိုပါ RNA chloroform သုံးပြီး DNA ကိုများနှင့်ပရိုတိန်းကနေ RNA ခွဲထုတ်နှင့် isopropanol နှင့်အတူစုစုပေါင်း RNA precipitating, RNA Stats-60 (Teltest, Friendswood, TX) တွင် homogenizing ခြင်းဖြင့်ထုတ်ယူခဲ့သည်။ ။ ဒီအဲန်အေ (Turbo DNA ကို-အခမဲ့, ဘဝ Technologies က,, CA, USA) မှဖယ်ရှားခဲ့သည်နှင့်သန့် RNA ၏5ug ပြောင်းပြန် (Invitrogen catalog # 18080051 Superscript III ကိုပထမဦးစွာကမ်းနားလမ်း Synthesis) cDNA သို့ကူးရေးသောခဲ့သည်ညစ်ညမ်းမူ (:; GCCGAGGACTTGAACTTCACTCG reverse AGGCAGAGCTGGAGTCGGAGAT ရှေ့ဆက်) နှင့်ဒီဇိုင်း primer မှပုံမှန်သာΔFosB detect လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ primer နဲ့အသုံးချ Biosystems 7500 အစာရှောင်ခြင်း thermocycler အပေါ်: ΔFosB mRNA အရေအတွက် Real-time PCR (အသုံးချ Biosystems, Foster စီးတီး,, CA SYBR အစိမ်းရောင်) ကို အသုံးပြု. quantified ခဲ့သည် (:; TCCACGACATACTCAGCAC reverse AACGACCCCTTCATTGAC ရှေ့ဆက်) ကြွက် GAPDH detect လုပ်ဖို့။ အားလုံး primer Alibhai et al (ကြိုတင်စမ်းသပ်ချက်မှတိကျတဲ့နှင့် Linear ဘို့အတည်ပြုခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခံခဲ့ရသည်။ , 2007).
P-10, P ကို: ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆား Self-စီမံခန့်ခွဲ EC များနှင့် IC ကြွက်များကနေ NAc ၏ညာဘက်အခြမ်း sucrose, Hepes ကြားခံ, ဆိုဒီယမ်ဖလိုရိုက်, 8340% SDS နှင့် protease နှင့် phosphatase inhibitors (Sigma-Aldrich င်တစ်ဦးကြားခံအတွက် homogenized ခဲ့သည် -2850, P-5726) ။ ပရိုတိန်းအာရုံစူးစိုက်မှုကတော့ပီယပ် BCA ပရိုတိန်း assay Kit (Thermo သိပ္ပံ, IL, USA) ကို အသုံးပြု. အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းကြွက်ကနေထုတ်ယူပရိုတိန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်မလုံလောကျသောကွောငျ့, တူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စုကနေ2နမူနာအုပ်စုတိုင်းအဘို့အ4နမူနာထုတ်လုပ်အတူတကွထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှခဲ့ကြသည်။ ပရိုတိန်းနမူနာ 95 မိဘို့5°မှာ denatured ပြီးတော့တစ်ဦး polyvinylidene ဖလိုရိုက် (PVDF) အမြှေးပါး (Millipore MA, USA သို့လွှဲပြောင်းတစ်ဦး 10-20% polyacrylamide gradient ကိုဂျယ်လ် (စံ TGX, Bio-Rad Laboratories,, CA, USA) အပေါ်ကို run ခဲ့ကြသည် ) ။ အဆိုပါအမြှေးပါးΔFosBမူလတန်း antibody ကိုအတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးချေ-တန်း blocker (nonfat ခြောက်သွေ့တဲ့နို့), နှင့်အတူပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရ (ယုန်, 1: 1000, #2251, ဆဲလ် signal နည်းပညာ MA, ယူအက်စ်အေ) နှင့်β-actin မူလတန်း antibody ကို (mouse ကို, 1: 1000 , ဆဲလ် signal နည်းပညာ MA, ယူအက်စ်အေ), TBST နှင့်အတူဆေးကြောပြီးတော့ချောင်းအလယ်တန်းပဋိ (မြည်း Anti-ယုန် (780 nm), မြည်း Anti-mouse ကို (680 nm) နဲ့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီး, 1: 15000 Li-ကော Biosciences, NE ယူအက်စ်အေ)။ အနောက်တိုင်းချေထို့နောက် (Odyssey Li-ကော Biosciences, NE ယူအက်စ်အေ) နှင့် Odyssey ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ quantified ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်း imaged ခဲ့ကြသည်။
ပုံများအတွက် Figure11 (N = 3), ΔFosB်ဆဲလ် DAB (DAB peroxidase အလွှာကိရိယာအစုံ, Vector Laboratories,, CA, USA) နှင့်အတူစွန်း NAc ချပ်ထဲမှာΔFosB၏ immunohistochemical တံဆိပ်ကပ်ခြင်းမှတဆင့်မြင်ခြင်းနှင့်ရေတွက်ခဲ့သည်။ ဦးနှောက်ပို့စ်, fixed cryoprotected နှင့်လျှောအေးခဲနေသော microtome (Leica Biosystems, IL, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ရက်တွင် NAc်40 μmချပ်သို့ sectioned, ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါချပ်မျောကျန်ရစ်နှင့် endogenous peroxidases ကြိုတင် 1% ထရီနှင့် avidin: D (Vector Laboratories,, CA, USA) နဲ့ 3% ပုံမှန်ဆိတ်သငယ်ကိုသွေးရည်ကြည် (Jackson က ImmunoResearch, PA, USA) နဲ့ပိတ်ဆို့ရန်, မီးမငြိမ်းမီ 0.3xPBS နှင့်ဆေးခဲ့သည်။ 1% ဆိတ်သငယ်ကိုသွေးရည်ကြည်နှင့်အတူ 1000% ထရီ, 3xPBS နှင့်ဓါတ်ဖြေရှင်းချက် (Vector Laboratories,, CA, USA): NAc ချပ် FosB မူလတန်း antibody ကိုနေ့ချင်းညချင်း (0.3, Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Dallas မြို့, တက္ကဆပ်, အမေရိကန်နိုင်ငံ 1) နဲ့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ ဒီ antibody ကို FosB နှင့်ΔFosBနှစ်ဦးစလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုပေမယ့် FosB 24 ဇ (Perrotti et al မတိုင်မီကောင်းစွာ degrades သောကွောငျ့, ကြိုတင်အနောက်တိုင်းချေလေ့လာမှုများ 24 ဇ post ကိုဆွမှာ, immunohistochemical signal ကို၏ကျယ်ပြန့်အများစုΔFosB၏ရေးစပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ , 2008) ။ အဝတ်လျှော်ပြီးနောက်အချပ်တစ် biotinylated ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန်အလယ်တန်း antibody ကို IgG (Vector Laboratories,, CA, USA), ဆိတ်ကိုသွေးရည်ကြည်နှင့် 1xPBS နှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်ချပ် 15 မိ (Thermo သိပ္ပံ, IL, အမေရိကန်နိုင်ငံ) အတွက်တစ်ဦး avidin-ဓါတ်ရှုပ်ထွေးသော (Credit: ABC) peroxidase အစွန်းအထင်းတွေနဲ့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ချပ်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်, အီသနောကို အသုံးပြု. dehydrated နှင့် CitriSolv (Fischer သိပ္ပံ MA, ယူအက်စ်အေ) နှင့် DPX (Fisher ကသိပ္ပံ) နှင့် coverslipped ။ ဆဲလ်ရေတွက်ဘို့, အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်ထံမှ + 1.80 မှ Bregma + 1.44 ထံမှနမူနာခဲ့ကြသည်။ ΔFosB immunopositive ဆဲလ်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကတစ်ဦးချင်းစီကြွက်၏ core နဲ့ shell ကိုကနေလေး NAc အပိုင်းကနေရေတွက်ခဲ့သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် EC များနှင့် IC ကြွက်များတွင် FosB ။ (A-D) IC ၏ NAc shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက်ΔFosB၏ကိုယ်စားလှယ် immunohistochemistry DAB အစွန်းအထင်း (A နှင့် B) နှင့် EC (C နှင့် Dနှင့်အတူ) ကြွက် (B နှင့် D) နှင့် (မပါဘဲA နှင့် C) ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှု (N = 3) ။ (E) နဲ့ အရေအတွက် ...
Adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ် overexpressing FosB
ΔFosBနှင့်လူ့ renilla GFP (hrGFP ဖော်ပြထားတဲ့ AAV2-based အားနည်းချက်ကို; ။ Winstanley et al, 2007, 2009a,b) သို့မဟုတ် hrGFP ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းချက်ကို (N = 10 တစ်ခုချင်းစီ) ကိုကြွက် NAc သို့မြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်းခံခဲ့ရသည်။ အဘယ်သူမျှမ IC သောလူသားမြားရှိပါတယ်ကြောင့်, pair တစုံ-သျောကြွက်ΔFosBများ၏သက်ရောက်မှုကိုသရုပ်ပြသိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်းမှဆက်စပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ကဒီလေ့လာမှုအတှကျအစား IC ကြွက်၏အသုံးပြုခဲ့ကြသည် လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို / IC ပါရာဒိုင်း၏။ တစ်ဦး AAV hrGFP ဖော်ပြပေမယ့်အရာΔFosBတစ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် overexpress မထားဘူး။ ΔFosB၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး Vivo အတွက် (1, ယုန်, ဆဲလ် signal နည်းပညာ MA, USA သို့ 200) FosB မူလတန်း antibody ကိုအတူနဲ့ Immunofluorescence အစွန်းအထင်းများကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ AAV virus သယ်ဆောင် (သြဒီနိတ်သုံးပြီး (1 10 မိကျော် / ခြမ်းμl) နှစ်နိုင်ငံ NAc shell ကိုသို့ထိုးသွင်းခဲ့ကြAP = 1.7, L = 2.0, D = -6.5) ။ အဆိုပါအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုဟာ stereotaxic ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်3ရက်သတ္တပတ်စတင်ခဲ့သည်။ တိကျနေရာချထားအပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်း၏နိဂုံးအပြီး immunohistochemically ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ကြွက် overexpressing ΔFosB (N = 10) နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက် (N = 8) ကြိုတင်အပြုအမူစမ်းသပ်မှုရဲ့ start မှ 1 တစ်ပတ်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူများအတွက်စမ်းသပ်ဖို့, ကြွက်တစ်ဝတ္ထုအရသာ (sucrose) မှ neophobia များအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ကြွက်တစ်ဦးချင်းစီအိတ်များထဲသို့ကွဲကွာခဲ့ကြနှင့်ရေ 1600 ဇမှာဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ စံကြွက်ရေပုလင်းအဆိုပါကြွက်များ '' သာမန်အတွက် w / v sucrose ဖြေရှင်းချက်ရေ "ကိုအသာပုတ်" နှင့် 1 ဇမှာတစ်ခုချင်းစီကိုလှောင်အိမ်အပေါ်ထားရှိမခံရမီအလေးချိန်တစ် 1800% နှင့်ပြည့်စုံခဲ့သည်။ 30 MIN ပြီးနောက်စမ်းသပ်တွက်ချက်ခဲ့သည်မီနှင့်ပြီးနောက်ပုလင်းကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်နှင့်အ-ချိန်တွယ်နေနှင့် sucrose ပုလင်းများ၏အလေးချိန်၏ခြားနားချက်။ ထို့နောက် sucrose အဆိုပါကြွက်များမတိုင်မီ sucrose preference ကိုစမ်းသပ်ဖို့ sucrose ၏အရသာမှရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေကာအပိုဆောင်း2ရက်ပေါင်းများအတွက်အိတ်များပေါ်အစားထိုးခဲ့သည်။
စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုသည်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္ (EPM), sucrose neophobia ပြီးနောက်2ရက်ပေါင်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ အဆိုပါ EPM အတိုင်းအတာတစ်ဝတ္ထုနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ထုတ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင် (အစိမ်းရောင် et al အတွက်အားနည်းချက်ကို-ပြုပြင်ထားသောရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူ။ , 2008) ။ နှစ်ဦးကတံခါးပိတ်လက်နက်နှစ်ခုဖွင့်ထားလက်နက် (Med Associates မှ Inc ကို, VT, အမေရိကန်နိုင်ငံ) တိုင်းတာခြင်း 12 × 50 စင်တီမီတာ 75 စင်တီမီတာကြမ်းပြင်အထက်တို့အသီးအသီးလက်မောင်းများ၏ဝင်ပေါက်မှာ photobeams ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖွင့်လက်မောင်းပေါ်ကုန်အချိန် Med-PC ကို software ကိုသုံးပြီး photobeam လပ်ချိန်အားဖြင့်5မိဘို့စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။
EPM ပြီးနောက်တစ်ရက်တွင်, တတိယစိုးရိမ်စိတ်စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့သည်: ကျင်ကြီးစွန်တစ်ဦးအနည်းငယ်စိတ်ဖိစီးမှုပတ်ဝန်းကျင် (အအေး) ကိုတုန့်ပြန်ပါ။ Polycarbonate mouse ကိုလှောင်အိမ် (33 × 17 × 13 စင်တီမီတာ) 10 မိဘို့ရေခဲပေါ် Pre-မျြးစိမျ့စိမျ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကြွက်များ 30 မိဘို့ရေခဲပေါ်လှောင်အိမ်ထဲမှာထားကြ၏နှင့် fecal boli ၏နံပါတ်တိုင်း5မိမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
အောက်ပါနေ့ရက်တွင်, စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူတစ်ခုလူမှုရေးအပြန်အလှန်စမ်းသပ်သုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်။ ကြွက်ကြိုတင်စမ်းသပ်ဖို့ 24 ဇဘို့ကွဲကွာခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုနေ့၌ကြွက်သူတို့ရဲ့လှောင်အိမ်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အပြုအမူနဲ့ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင် (ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာ, 45 × 40 × 45 စင်တီမီတာ) ၌ထားကြ၏ဗီဒီယိုကို 30 မိဘို့မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကြွက်များ၏တစ်စုံတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမြောကျမတို့သုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုကြွက် '' အခွအေနေမှမျက်စိကန်းတစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည်။
Sucrose preference ကို
လူမှုရေးအဆက်အသွယ်ပြီးနောက်, sucrose preference ကိုစမ်းသပ် anhedonia တစ်မော်ဒယ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Pair ကို-သျောကြွက်အစားအသောက်နှင့်အတူ 1600 ဇမှာကွဲကွာပေမယ့်2ဇဘို့ရေကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုမခံခဲ့ရပါ။ 1800 ဇ at နှစ်ခု Pre-အလေးချိန်ရေပုလင်း, တစ်ဦးချင်းစီလှောင်အိမ်ပေါ်ရေ၌အခြားတစ်ဦး 1% sucrose ဖြေရှင်းချက်ရေပါဝင်တဲ့တဦးတည်းထားရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ sucrose 10 စင်တီမီတာကွာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နေရာချနေစဉ်အဆိုပါရေပုလင်းပုံမှန်အနေအထား၌ထားကြ၏။ အဆိုပါပုလင်း 15 မိပြီးနောက်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပြန်လည်ချိန်ခဲ့ကြသည်။
သုံးရက် sucrose preference ကိုအပြီး, locomotor လှုပ်ရှားမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်း Plexiglas အခန်းများအတွင်းကြွက်များအားမရသဖြင့်သာမန်အလင်းအခြေအနေများအောက်တွင်အကဲဖြတ်ခဲ့သည် (40 × 40 × 40 စင်တီမီတာ) နှစ်ခု4×4photobeam မက်တရစ်, အထက်တဦးတည်း4စင်တီမီတာကဝိုင်းအိပ်ယာ၏ပါးလွှာသောအလွှာနှင့်အတူ အလျားလိုက်လူနာတင်ယာဉ်နှင့်ဒေါင်လိုက် (ပွုစုပြိုးထော) လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ဖို့မြေပြင်အထက်မြေပြင်နှင့်တစ် 16 စင်တီမီတာ။ Photobeam လပ်ချိန်တစ်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်လွင်ပြင်လှုပ်ရှားမှုစနစ် (San Diego မှတူရိယာ,, CA, USA) က2ဇများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအလိုအလျောက်အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှု FST, စိတ်မကျဆေး Antidepressants မှအထိခိုက်မခံတဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြွက်ကအခန်းအပူချိန် (14 ± 24 °) ကြိမ်မြောက် 0.5 အပေါ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ 15 အပေါ် 1 မိနှင့်5မိဘို့ရေကိုအောက်ပါနေ့ရက်ကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2L ကိုနှငျ့ပွညျ့စုံတစ် Plexiglas ဆလင်ဒါသို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကြွက်အခြောက်နှင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်အိတ်များထဲသို့ပြန်နေရာချပေးခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှုရေကူးကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောခဲ့ immobility (1 ့) နှင့်စုစုပေါင်းအချိန်ရွေ့၏ပထမဦးဆုံးကာလဖို့အောင်းနေချိန်အခြေအနေမှမကျြစိကှတစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ2ဘို့ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။
ထိန်းချုပ်ရေး AAV ကြွက်များနှင့်ΔFosB-overexpressing ကြွက် 85 ရက်ပေါင်းကျော်အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးမှုအလေးချိန်%7ဖို့စညျးမဉျြးစညျးကမျးရှိကြ၏။ အားလုံးကြွက် 1 ရက်ဆက်တိုက်အပေါ် 15 မိအစည်းအဝေးများများအတွက်အားဖြည့်တဲ့ FR5 အချိန်ဇယားအပေါ် (Bio-စားသုံးခြင်း, NJ, USA) sucrose လုံးလေးများများအတွက်ဘားစာနယ်ဇင်းမှလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကြွက်ထို့နောက်3နေ့ရက်ကာလအဘို့စားစရာကိုအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတဲ့နှင့်နောက်တဖန် 1% အခမဲ့-feed ကိုအလေးချိန်မှာ 15 မိများအတွက် FR100 အချိန်ဇယားအပေါ် sucrose လုံးလေးများအဘို့ဤအချိန်-စာနယ်ဇင်းဘားခွင့်ပြုခဲ့သည်။
တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ပြွန်ခွဲစိတ်ကုသ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့), အားလုံးကြွက်ပြီးနောက် (7 ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များနှင့် 10 ΔFosBကြွက် overexpressing, တဦးတည်းကိုထိန်းချုပ်ကြွက်ပြွန်ခွဲစိတ်ကုသရာမှပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်) အော်ပရေတာအခန်းများ 30 × 24 × 21 စင်တီမီတာ (Med-Associates မှ, စိန့်၌ထားကြ၏ Albans, VT) နှင့် 0.2 နေ့ရက်ကာလအဘို့ session တစ်ခုနှုန်း2ဇဘို့ကိုကင်း၏ Self-စီမံခန့်ခွဲ4mg / kg / ပြုတ်ရည်ယူနစ်ထိုးဖို့ခွင့်ပြုခဲ့; ထို့နောက် 0.5 တစ်ခု FR3 အချိန်ဇယားအပေါ် 1 နေ့ရက်ကာလအဘို့ / ကီလိုဂရမ် / ပြုတ်ရည် MG ။ တစ်ခုချင်းစီကိုပြုတ်ရည် 0.01 s ကိုကျော် 5.8 ml တစ် volume ထဲမှာသွေးကြောသွင်းကယ်နှုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပြုတ်ရည်မပါထပ်မံတာဟာမှီနိုင်ရာစဉ်အတွင်းတစ်အချိန်ကုန်ကာလအချက်ပြပေးသော 20 s အတွက်နှစ်ခု cue အလင်းအိမ်၏ illumination အားဖြင့်အချက်ပြခဲ့သည်။
နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ယူဆရနှစ်ဦးစလုံးအားနည်းချက်ကိုအခြေအနေများအတွက်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာΔFosB၏မြင့်မားရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုသောထိန်းချုပ်မှုကြွက်များတွင်ΔFosB၏စုဆောင်းခြင်းသွေးဆောင်မယ်လို့ကြောင့်, ကြွက်ခွင့်ပြုပါရန် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမပါဘဲ4နေ့ရက်ကာလအဘို့သူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်မှချုပ်ထားခဲ့ကြသည် ထိန်းချုပ်မှု-အားနည်းချက်ကိုကြွက်များတွင်လျော့ချဖို့ΔFosBပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်။4ရက်ပေါင်းနေကြပြီး, ကြွက်အော်ပရေတာအခန်းထဲက၌ထားကြ၏နှင့် 1 ရက်ဆက်တိုက် Self-စီမံခန့်ခွဲဆားအစား 1 ဇအစည်းအဝေးများတစ်ခု FR3 အချိန်ဇယားအောက်တွင်ကင်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုကြွက် (ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ΔFosB overexpressing) Self-စီမံခန့်ခွဲ 0.00325, 0.0075, 0.015, 0.03, 0.06, 0.125, 0.25 ခွင့်ရခဲ့သည်, 0.5 1 ရက်ဆက်တိုက်နေ့တိုင်းတစ်ဦး FR5 အချိန်ဇယားအပေါ်အမိန့်ကျကွှအတွက် / ကီလိုဂရမ် / ပြုတ်ရည်ကိုကင်း MG ။ ကြွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ 30 မိဘို့ကိုကင်းအသီးအသီးထိုး။
ကြွက်တစ်ဦးအတွင်း-session တစ်ခု reinstatement လုပ်ထုံးလုပ်နည်းခံယူ။ ကြွက် 0.5 မိများအတွက် FR1 အချိန်ဇယားအပေါ် 60 mg / kg / ပြုတ်ရည်ကိုလက်ခံရရှိ (ကဆက်ပြောပါတယ်ကိုကင်းတွေကိုနှင့်အတူ) မျိုးသုဉ်း၏3ဇနော။ Next ကိုသူတို့ (အစိမ်းရောင် et al တစ်ခု IP ကိုဆေးထိုးရရှိခဲ့သည်။ , 2010) ငါးကြိမ် (0, 2.5, 5, 10, ဒါမှမဟုတ် 20 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) တစျဦး၏ကိုကင်းများ၏ reinstatement ၏5အစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီကြွက်များအတွက်ကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်။ အဲဒီ session ၏နောက်ဆုံး3ဇအဆင့်ကိုကင်းတွေကိုနှင့်အတူနောက်တဖန်, တုံ့ပြန်သို့သော်ကင်းတာဟာမပါဘဲ reinstatement ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement သင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်ယင်းကြွက်များအစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးတုံ့ပြန်မြင့်မားမှုနှုန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့2ဇများအတွက် FR0.5 အချိန်ဇယားအပေါ် 1 မြင့်သောဆေးထိုး၏ရက်ပေါင်းကွား (2 mg / kg / ပြုတ်ရည်) ကိုကင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်အတွင်းအချို့ကြွက်များ၏ပြွန်တဖြည်းဖြည်း patency ဆုံးရှုံးခဲ့ရ; ဤအရပ်မှ,6ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များနှင့်7ΔFosB-overexpressing ကြွက်များ၏ဒေတာကိုဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
Two-လမ်းကှဲလှဲ (ANOVAs) ၏လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVAs လေးပါးကုသမှုအုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်ပြုခံခဲ့ရခြင်းနှင့်စီစဉ်ထားသည့်နှိုင်းယှဉ်အခြေအနေများအကြားခြားနားချက်ကိုနှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သာအခြေအနေနှစ်ခုအကြားအရေးပါမှုဟာကျောင်းသားရဲ့သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည် t-test ။ အားလုံး t-test data တွေကိုပုံမှန်၏ Shapiro-Wilkes စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး။ ဒေတာအားလုံးကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှုမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် p <0.05 ။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွက်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသောကြွက်များကိုလှောင်အိမ်တစ်ခုထဲ၌ထည့်ထားသော်လည်းသီးခြားဘာသာရပ်များအဖြစ်ကုသခဲ့သည်။
EC ကြွက်၏မြင့်မား Basal အဆင့်ဆင့်ကိုပြသ IC ကြွက်များထက် NAc အတွက် FosB
IC ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, EC အကြွက်များ (နှစ်ဦးစလုံး NAc core ကိုအတွက်ΔFosBအပြုသဘောဆဲလ်တစ်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အရေအတွက်ရှိသည်t(4) = -3.31, p <0.05) နှင့် shell ကို (t(4) = -6.84, p <0.05) (ကိန်းဂဏန်းများ 1A, C, E နဲ့, F ကို), ΔFosB၏ Basal သေံ IC ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် EC အကြွက်များအတွင်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအကြံပြု။ ထို့အပြင်, အနောကျပိုငျးချေရလဒ်များကို IC ဆားကြွက် (နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosBပရိုတိန်း၏မြင့်မား Basal အဆင့်ရှိခြင်း EC ဆားကြွက်အဘို့ခိုင်ခံ့လမ်းကြောင်းသစ်ပြသt(6) = -2.03, p = 0.089; ဂဏန်း Figure2A) 2A) နှစ်အမြီးစမ်းသပ်သုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ကိန်းဂဏန်းများအတွက်တိုးမြှင့်စကားရပ်ပေးထား 1A-F ကို နှင့်အခြားစာတမ်းများ (Solinas et al များ၌တွေ့မြင်တိုး။ , 2009), ကျနော်တို့ကဒီသက်ရောက်မှုကိုယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ အနောက်တိုင်းချေတွေ့ရှိချက်လည်းလုံးဝနီးပါးအားလုံး immunohistochemistry အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် FosB ကဲ့သို့ immunoreactivity ၏အတည်ပြုရန် 24 ဇမှာရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. မဟုတ်ခဲ့သည့်ΔFosBနှင့်မ FosB ခဲ့သည်။
ကိုကင်းနှင့်အ EC များနှင့် IC ကြွက်များတွင် FosB ။ (A-B) မှ ΔFosBပရိုတိန်းကိုဆိုလိုတာ (က) နှင့် mRNA (ခ) IC နှင့် EC ကြွက်များတွင်ဆားသို့မဟုတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး 14 ရက်အကြာမှာ NAc အတွက်အဆင့် (± SEM) (N = 7-8) ။ Panel ထဲကအနီရောင်ခညျြအနှောတစ်ဦး denote ...
FosB differential စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့် EC အများနှင့် IC ကြွက်များတွင်သွေးဆောင်နေသည်
နှစ်ဦးစလုံးအခွံထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်F(1, 8) = 16.6, P <0.005) နှင့် core ကို (F(1, 8) = 7.9, P <0.05) ၏ NAc နှင့် shell ကိုအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F(1, 8) = 22.3, P <0.005; ကိန်းဂဏန်းများ 1A-F ကို) ။ ပို. အရေးကြီးသည်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်အကြားအပြန်အလှန် (စနှစ်ဦးစလုံးအခွံအတွက်သိသာထင်ရှားသောခဲ့သည်F(1, 8) = 25.6, P <0.01) နှင့် core ကို (F(1, 8) = 6.7, P <0.05) ။ ဒီအပြန်အလှန်ထပ်ခါတလဲလဲထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်, ဒီနံပါတ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက် EC ကြွက်များတွင်မပြောင်းခဲ့ဘူးစဉ်ΔFosBအပြုသဘောဆဲလ်အရေအတွက်သိသိသာသာ, IC ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်သော, ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ခဲ့သည်
နောက်ထပ်ΔFosBသည် dynamically ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှု vs. စူးရှသောအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မည်သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ကြိုတင်သုတေသနပြု (Alibhai et al နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခွင့်ပြုပါရန်။ , 2007ΔFosB၏), induction mRNA စူးရှနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု (ပုံနှင့်အတူလေ့လာခဲ့ခဲ့သည် (Figure1G) .1G) ။ စိတ်ဖိစီးမှုများသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်F(2, 24) = 31.9, P <0.001) နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင် (F(1, 24) = 5.1, P <0.05) ။ IC ကြွက်များတွင် osFosB mRNA သည်ပြင်းထန်သောထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ပြင်းထန်စွာသွေးဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူ osFosB mRNA ၏ induction စူးရှသောသော induction နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာ attenuated ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်လည်းရှိခဲ့သည်F(2, 24) = 4.6, P <0.05), osFosB mRNA ၏စူးရှသော induction IC ကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ EC ကြွက်များတွင်လျော့နည်းခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် EC အကြွက်များΔFosBမြင့်မား Basal အဆင့်ဆင့်ရှိ ပရိုတိန်း အဆိုပါ NAc, ဒါပေမယ့်ဒီထက်ΔFosBအတွက် mRNA တစ်ခုစူးရှသောဖိအားတုံ့ပြန်သော induction ။
FosB differential EC များ၏ NAc နှင့် IC ကြွက်များတွင်ကင်းသဖြင့်သွေးဆောင်နေသည်
EC များနှင့် IC ကြွက်များကိုကင်းမှကွဲပြားခြားနားကိုတုံ့ပြန်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကျနော်တို့ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ကိန်းဂဏန်းများအပြီးကြွက် NAc အတွက်ΔFosBပရိုတိန်းနှင့် mRNA ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုလေ့လာ 2A, B, အသီးသီး) ။ တစ်ဦးကအနောက်တိုင်းချေ (ကင်း၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားF(1, 12) = 24.9, P <0.001) နှင့်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန် (F(1,12) = 5.5, P <0.05) ။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်အချက်မှာ osFosB သည် EC ကြွက်များထက် EC ကြွက်များတွင်ပိုမိုများပြားလာသည် (ပုံ (Figure2A) .2A). တကယ်တော့ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ΔFosBပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းသိသိသာသာမွငျ့မားခဲ့ကြ သာ IC ကြွက်များဖြစ်သည်။ mRNA အဆင့်ဆင့်နှင့်စပ်လျဉ်း qPCR ရလဒ်များကိုလည်း (ကိုကင်းများသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားF(1, 26) = 47.1, P <0.001) နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်မှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F(1, 26) = 13.8, P <0.005) ။ EC ကြွက်များတွင်ယေဘုယျအဆင့်များသည်နိမ့်နေသော်လည်းအုပ်စုနှစ်ခုစလုံးသည် osFosB mRNA တိုးပွားလာသည် (ပုံ (Figure2B2B).
ပရိုတိန်း data တွေကိုမူရင်းအယူအဆထောက်ခံသော်လည်းပုံကနေတွေးဆခဲ့သည် Figure1G1G EC အကြွက်များလျော့နည်းပြသမယ်လို့ mRNA ပုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖွယ်ရှိ, ဖြစ်ပျက်မပြုခဲ့သောအထက်ကင်းစမ်းသပ်မှုအတွက်အထီးကျန်ကြွက်များထက်သော induction Figure1G1G တစ်ဦး 30 မိ timepoint အသုံးပြုသွားမည်နှင့်ကိုကင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခု3ဇ timepoint အသုံးပြုသွားမည်။ နောက်ထပ် mRNA အယူအဆမွေးမွနျးဖို့တစ် 30 မိအချိန်မှတ်ပုံမှပိုကောင်းတဲ့နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်စူးရှနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲနှစ်ဦးစလုံးကိုကင်းကုသမှုစူးစမ်းဖို့အသုံးပြုခဲ့သည် Figure1G.1G။ စူးရှသောကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသဘောသဘာဝ (ဆိုလိုသည်မှာဝယ်ယူသင်ယူမှု) ကပြဿနာဖြစ်ပါသည်သောကြောင့်, EC နှင့် IC ကြွက်ထပ်ခါတလဲလဲ Non-ဆက်ပြောပါတယ်ကင်း IP ကိုထိုး (9 mg / kg) ၏စူးရှသောသို့မဟုတ် 20 ရက်ပေါင်းပေးခဲ့သည်။ တွေးဆအမျှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါသည် (F(1, 17) = 14.3, P <0.005), ဒါပေမယ့်ကိုကင်းကုသမှုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F(2, 17) = 3.4, P = 0.057) နှင့်အပြန်အလှန် (F(2, 17) = 3.4, P = 0.055) တစ်ခုသာ Two-Tails စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူခိုင်မာသောခေတ်ရေစီးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ကျနော်တို့ပုံကနေ directional ယူဆချက်ခဲ့ပေးထား Figure1G, 1Gကျနော်တို့ EC အကြွက်များ IC ကြွက်များထက်လျော့နည်းသော induction ဖော်ပြရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင် (ပုံထဲမှာအလွန်အဆင်ပြေများမှာ (Figure2C2C).
၏ Overexpression NAc shell ကိုတူတဲ့အတွက် FosB ကိုကာကွယ်သန့်စင်-သွေးဆောင်စွဲ phenotype
ကြွက်အပြုအမူအပေါ်ΔFosB၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင် / အထီးကျန်မှုတွေ (ဆိုလိုသည်မှာ non-EC / IC လေ့လာမှုများဤရလဒ်များကိုပိုပြီးသက်ဆိုင်ရာအောင်), adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (AAV) ၏လွတ်လပ်သောအတွက် NAc နှစ်နိုင်ငံΔFosB overexpress ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည် Non-သန့်စင် pair တစုံ-သျောကြွက်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုများအရ, NAc shell ကိုစိတ်ကျရောဂါ-ဆက်စပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေ / AAV virus သယ်ဆောင်ဒီလေ့လာမှု (စိမ်း et al အတွက် NAc shell ကိုအတွက်ထိုးသွင်းခဲ့ကြဒါအပြုအမူရှာကြံထိန်းချုပ်ဖို့အများဆုံးအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ , 2006, 2008, 2010) ။ ကိန်းဂဏန်းများ 3A, B, အဆိုပါ NAc shell ကိုနှင့်ΔFosB-overexpressing အားနည်းချက်ကို (panel ကို B ကို); ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းချက်ကို (ဆိုလိုသည်မှာ endogenous ΔFosBစကားရပ် panel ကိုတစ်ဦး) နဲ့ΔFosB၏ကိုယ်စားလှယ် immunohistofluorescence ပြသပါ။
၏ Overexpression NAc shell ကိုအတွက် FosB သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏အကာအကွယ်စွဲ phenotype အတုယူ။ (A-B) မှ hrGFP ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ΔFosB၏ကိုယ်စားလှယ် immunohistochemistry (က) နှင့်ΔFosB-overexpressing (ခ) AAV virus သယ်ဆောင်။ ...
အဆိုပါ titer အတည်ပြုတော်မူပြီးမှ, Vivo အတွက် စကားရပ်များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို၏ယေဘုယျနေရာချထားကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးစိုးရိမ်စိတ်မော်ဒယ်များအတွက်ΔFosB၏ overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB၏ Overexpression အဆိုပါ sucrose neophobia နှင့်အအေး-စိတ်ဖိစီးမှုသွေးဆောင်ကျင်ကြီးစွန် Paradigm အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏ anxiogenic အကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးပွားရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ (ဒေတာပြမပါ) ။ ထို့အပြင် EPM မသက်ရောက် (Data ပြမဟုတ်) ရှိ၏။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ကြွက်များတွင်လက္ခဏာတူသောအကျိုးသက်ရောက်ထုတ်လုပ်သောကြောင့်, ကျနော်တို့လာမယ့်ΔFosB-overexpressing ကြွက်အပေါ်စိတ်ကျရောဂါ-related စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စိုးရိမ်စိတ်မော်ဒယ်များဆင်တူ, ရလဒ်များကို NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB overexpressing အဆိုပါ sucrose preference ကိုစမ်းသပ်, လူမှုရေးအပြန်အလှန်စမ်းသပ်မှုဒါမှမဟုတ် FST အတွက်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုလျော့ချဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းပြသ (ဒေတာပြမပါ) ။
ပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ပါရာဒိုင်းခုနှစ်, EC အကြွက်များ IC ကြွက် (ဘိုးလင်း et al ထက်နိမ့် Basal locomotor လှုပ်ရှားမှုပြ။ , 1993; ဘိုးလင်းနှင့် Bardo, 1994; Smith က et al ။ , 1997; အစိမ်းရောင် et al ။ , 2003, 2010) ။ အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB overexpressing ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, အလိုအလျောက် locomotor လှုပ်ရှားမှု 120 မိဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ အဆိုပါရလဒ်များ NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB overexpressing ကြွက်များတွင်လျော့နည်းသွား Basal locomotor လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ခိုင်မာသောလမ်းကြောင်းသစ် (ပုံထုတ်လုပ်ကြောင်းထင်ရှားနေတဲ့ Two-tailed စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်း (Figure3C; 3C; t(16) = 1.84, p = 0.084) ။ နှစ်အမြီးစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူအတော်လေးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ငြားလည်းဤဒေတာတုန်းပဲသူတို့အစိမ်းရောင် et al အပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ directional ယူဆချက်မှကိုက်ညီကြောင်းပေးထား intriguing နေကြသည်။ (2010), အရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။
Iဎ NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB၏ overexpression မျိုးစုံစွဲ / အားဖြည့် Paradigm အတွက် EC-တူသော phenotype ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မော်ဒယ်များမှနှိုငျးယှဉျ။ ငါဎအဆိုပါ sucrose တောင့်အော်ပရေတာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးစမ်းသပ်မှု, ΔFosB overexpression နှင့်ကြွက်များ၏ဆာလောင်မွတ်သိပ်လှုံ့ဆျောမှု (အကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်ရှိခဲ့F(1, 16) = 7.4, P <0.01) ။ cFosB အလွန်အကျွံထုတ်ယူသောကြွက်များသည် NAc အခွံတွင်သိသိသာသာများပြားသည် နောက်ထပ် sucrose ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု-လှုံ့ဆော်မှုအခြေအနေများ (ဆိုလိုသည်မှာ 85% အခမဲ့ feed ကို bodyweight မှာ) နှစ်အောက်လုံးလေးများပေမယ့်အနိမ့်လှုံ့ဆော်ခွအေနအေအောက်မှာနည်းပါးလာလုံးလေးများ (ဆိုလိုသည်မှာ 100% အခမဲ့ feed ကိုအလေးချိန်; ပုံ Figure3D), 3D), (အစိမ်းရောင် et al ဿုံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို phenotype အတုယူရာ။ , 2010).
ပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ပါရာဒိုင်းခုနှစ်, EC အကြွက်များသုဉ်းခြင်းနှင့်ကင်း-သွေးဆောင် reinstatement အတွက်လျှော့ချကင်း-ရှာကြံအပြုအမူပြသ (အစိမ်းရောင် et al ။ , 2010). ထို့ကြောင့်ကင်း-ဆည်းပူးနေနှင့်အပြုအမူရှာသွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးΔFosB-ဖော်ပြကြွက်များတွင်တိုင်းတာခဲ့သည်။ တဏှာတစ်ခုမော်ဒယ်အတိုင်း, ကင်းသုဉ်းပါရာဒိုင်းဟာ NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB overexpression မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံ behavio လျော့နည်းသွားကြောင်းထင်ရှားr (F(1, 15) = 6.7, P <0.05; ပုံ Figure3E) .3E) ။ session ရဲ့သိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (လည်းရှိခဲ့သည်F(2, 30) = 74.0, P <0.001) ။ FR1 အချိန်ဇယားအရပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုတုန့်ပြန်ရန်အတွက်ဆေး၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။F(7, 105) = 222.6, P <0.001) နှင့်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန် (F(7, 105) = 2.3, P <0.05) တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာစားသုံးမှုအတွက်။ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏သဘောသဘာဝအရကွဲပြားခြားနားမှုများသည်ကိုကင်းပမာဏမြင့်မားစွာဖြင့်သာသိသာထင်ရှားစေသည် (Figure3F) .3F) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကင်းသွေးဆောင် reinstatement အတွက်ဆေးထိုးနေတဲ့သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့F(4, 44) = 15.5, P <0.001) နှင့်နှစ် ဦး အမြီးစမ်းသပ်သုံးပြီး osFosB overexpression ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ် (F(1, 11) = 4.1, P = 0.067) ။ သို့သော်အစိမ်းရောင် et al ထံမှ directional အယူအဆပေးတော်မူ၏။ (2010) နှင့်ကိန်းဂဏန်းများအတွက်ကစာရင်းအင်းသိသာနှင့်ကိုက်ညီသောရလဒ်များကို 3D, အီး, F ကိုဒါကြောင့်ΔFosB reinstatement (ပုံလျော့ကျကြောင်းဖွယ်ရှိသည် (Figure3G) .3G) ။ အဆိုပါ 10 မီလီဂရမ်မှာတုံ့ပြန် / ကီလိုဂရမ်ထိုးΔFosB-ဖော်ပြကြွက်များအတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သည်။ တစ်ဖွဲ့လုံးကရလဒ်တွေကိုကြွက် NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB overexpressing သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ကိုက်ညီသောကိုကင်းတာနှင့်အပြုအမူရှာကြံလျော့ကျကြောင်းဖော်ပြသည်။
စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါမှတစ်ဦးချင်းစီ၏အားနည်းချက်အကြီးအကျယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်အများအပြားစိတ်ရောဂါအခြေအနေများဆန့်ကျင်အကာအကွယ်သက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်တိရိစ္ဆာန်များ၏လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်တွက်ချက်တဲ့ပါရာဒိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ΔFosBအဆိုပါ NAc နှင့် dorsal striatum (Koob et al အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဆုလာဘ် function ကိုထိန်းညှိအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍ, ပါဝင်သည်။ , 1998; ပညာရှိ 1998; Wallace et al ။ , 2008; Grueter et al ။ , 2013; အိုး et al ။ , 2013). ဤစီမံကိန်းများတွင်ကျနော်တို့သန့်စင်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်ကြွက်များတွင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ကိုကင်းများကΔFosB၏ dynamic စည်းမျဉ်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဤစီမံကိန်းများ၏အဓိကတွေ့ရှိချက်များမှာ:
(1) EC အကြွက်များ IC ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြေခံမှာ NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်သို့ခြီးမွှောကျပြီ
(2) သာ IC ကြွက်အထပ်ထပ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူအပိုဆောင်းΔFosBပရိုတိန်းစုပြုံ;
(3) EC အကြွက်များစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ကင်းမှနောက်ဆက်တွဲΔFosB mRNA ၏ attenuation သော induction ဖော်ပြရန်; နှင့်
(4) pair တစုံ-သျောကြွက်များ၏ NAc အတွက်ΔFosB overexpressing ကိုကာကွယ်စိတ်ကျရောဂါ phenotype ကိုကာကွယ်စွဲ phenotype အတုယူ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။
တဦးတည်း Transgene ΔFosB overexpressing ကြွက်အနိမ့်မူးယစ်ဆေးဆေးများ (မှာကင်းဆုလာဘ်များနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင် sensitivity ကိုပြသသောပြသသောအဆိုပါထုတ်ဝေစာပေကနေမျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ,Kelz et al ။ , 1999; Colby et al ။ , 2003; Vialou et al ။ , 2010; Robison et al ။ , 2013), လက်ရှိစမ်းသပ်မှုအတွက်ΔFosB-overexpressing ကြွက်များကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ရှာဘို့တိုးလာ propensity ဖော်ပြရန်မယ်လို့။ Iလက်ရှိစမ်းသပ်ချက် n သို့သော် NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB overexpressing ကင်းဘို့လျှော့ချလှုံ့ဆျောမှုညွှန်း, မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့် reinstatement စဉ်အတွင်းရှာကြံကင်းစားသုံးမှုနှင့်ကိုကင်းလျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါကွာဟမှုကြောင့် Transgene ကြွက်သာ dynorphin + ဆဲလ်ထဲမှာတစ်ခုလုံးကို striatum တစ်လျှောက်လုံးΔFosBထုတ်ဖော်ပြောဆိုဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဖြစ်နိုင် (Colby et al ။ , 2003). လက်ရှိစမ်းသပ်မှုများတွင်ΔFosB dynorphin + နှင့် enkephalin + အာရုံခံကူးစက်သည့် AAV vector မှတဆင့် overexpressed ခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာလက်ရှိလေ့လာမှု NAc shell ကိုထက်တပြင်လုံးကို striatal ဒေသအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
အဆိုပါစွဲ phenotype အပြင်, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ကြွက်များတွင်လက္ခဏာနှင့် anxiogenic ကဲ့သို့ profile များကိုထုတ်လုပ် (အစိမ်းရောင် et al ။ , 2010; Vialou et al ။ , 2010). လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ NAc အတွက်ΔFosB၏ overexpression သုံးခုစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်သုံးခုစိုးရိမ်စိတ်စမ်းသပ်မှုတွင်မဆိုသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်ပျက်ကွက်။ အဆိုပါသန့်စင်စွဲပေမယ့်မစိတ်ကျရောဂါ phenotype န်းမှာΔFosBအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းများစွာသောဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများရှိပါတယ်သော်လည်းစိတ်ကျရောဂါ-ဆက်စပ်အပြုအမူကိုအခြားဒေသများအားဖြင့်ပိုပြီးစေ့စ့စပ်စပ်ကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါသော်လည်းအဆိုပါ NAc shell ကိုစွဲ-related အပြုအမူများအတွက်ပိုပြီးကြီးစိုးကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်အတွက်လေ့လာမှုများနှင့်အတူအလေးသာမှာ ကြွက် (တဦးတည်းယုံကြည်စိတ်ချရသော core ကို vs. shell ကိုခွဲခြားလို့မရပါဘူးဘယ်မှာ) ကို NAc အတွက်ΔFosB overexpression အများအပြားအပြုအမူ assay အတွက်ခိုင်မာတဲ့-လက္ခဏာတူသောသက်ရောက်မှု (Vialou et al ထုတ်လုပ်ရှိရာ။ , 2010). တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှအကြောင်းပြချက်ကြောင့်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုများကဲ့သို့ပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမူအကျင့်မော်ဒယ်များအပေါ်ΔFosB၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့မြင်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ overexpression လေ့လာမှုတစ်ဦးပြင်းထန်ဖိအားများ၏မရှိခြင်းအတွက်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူစုံစမ်းစစ်ဆေး။
တသမတ်တည်းဒီလေ့လာမှု, ΔFosBမြင့်မား Basal အဆင့်ဆင့် (ဥပမာသန့်စင်ကနေစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ကင်းထပ်ခါတလဲလဲ) လျှောက်လုံးΔFosB၏အားနည်းနောက်ဆက်တွဲသော induction ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ဒါဟာပရိုတိန်း၏မြင့်မားသော Basal အဆင့်ဆင့်၏ထိပ်ပေါ်မှာတတ်နိုင်သမျှမျှထပ်မံသော induction နှင့်အတူတစ်ဦးမျက်နှာကြက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ဒါဟာΔFosB၏စုဆောင်းအဆင့်ဆင့်တစ်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ကင်းပြီးနောက်ΔFosB mRNA ၏နောက်ထပ်သော induction တားစီးဖို့နောက်ကျောကိုကျွေးမွေးစေခြင်းငှါလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ, Eကို C ကြွက်ΔFosB၏မြင့်မားခဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ကင်းပြီးနောက်ΔFosBတစ်ခု attenuation သော induction ပြသခဲ့သည်။ ဤသည်ΔFosBပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်၎င်း၏ mRNA သော induction အကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုအလေးပေး။ စုဆောင်းΔFosB၏အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ကိုလည်း IC ကြွက်များတွင်အထပ်ထပ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူΔFosB၏ attenuation သော induction တွက်သည်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, ကျနော်တို့စစ်မှန်တဲ့ဆင်းရဲချို့တဲ့မှာကြီးပြင်းအလွန်နည်းပါးကလေးများ (ကလူမှုစီးပွားရေးဆင်းရဲချို့တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆင်းရဲချို့တဲ့ဖို့တူညီခြင်းမရှိပါကြောင်းမှတ်သားရပါမည်) ရှိပါတယ်အဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ပါရာဒိုင်း, တိုက်ရိုက် Translational ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့မဆိုတောင်းဆိုမှုများလုပ်မရကြပါဘူး။ ဒီပါရာဒိုင်း၏ utility ကိုကမော်လီကျူးယန္တရားများဖော်ထုတ်များအတွက်အခြေခံသိပ္ပံ tool ကိုအဖြစ်ဓာတ်ခွဲခန်း-controlled ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အမြတ်ထုတ်နိုင်စွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါအဘို့အကာအကွယ်အပြုအမူ phenotypes ထုတ်လုပ် non-မူးယစ်ဆေး, Non-ခွဲစိတ် non-မျိုးရိုးဗီဇကိုင်တွယ်ဖြစ်ပါတယ် စိတ်ရောဂါအခြေအနေများနောက်ခံခံနိုင်ရည်။ မတိုင်မီကသုတေသန (အသေးစိတ်အတွက်ဘိုးလင်း et al သည့်အမူအကျင့် phenotypes ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ , 1993; ဘိုးလင်းနှင့် Bardo, 1994; Bardo et al ။ , 1995; အစိမ်းရောင် et al ။ , 2002, 2003; အယ်လ် Rawas et al ။ , 2009) နှင့်ပိုပြီးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ (Solinas et al ။ , 2009; အစိမ်းရောင် et al ။ , 2010; Lobo et al ။ , 2013), လက်ရှိလေ့လာမှုနှင့်အတူဤအပြုအမူ phenotypes အခြေခံသည့်မှတ်တမ်းယန္တရားများအဖြစ်သဲလွန်စပေးနေကြသည်။ အဆိုပါမြစ်အောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ / ကိုကာကွယ် phenotypes ထုတ်လုပ်ပရိုတိန်းသည်လက်ရှိတွင် (ဝါသနာရှင် et al စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ , 2013a,b; Lichti et al ။ , 2014).
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးသန့်စင်မြင့်မားအဆုံးမှာနိမ့်အဆုံးမှာအထီးကျန်မှုတွေနဲ့အပြည့်အဝသန့်စင်နှင့်အတူတစ်ဦးစဉ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ "အပြည့်အဝ "ဤကိစ္စတွင်အတွက်သန့်စင်သည့်ဘာသာရပ်များအသစ်အဆန်း, conspecifics နှင့်အတူ Non-ခြိမ်းခြောက်လူမှုရေးအဆက်အသွယ်ထိတွေ့တဲ့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်, လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်အာကာသနှင့်အရာဝတ္ထုခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ Tသူတို့က NAc အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအကြိုးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီဖြန့်ချိ dopamine ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကဲ့သို့သောတစ်ဘုံ neurobiological circuitry ကိုသက်ဝင်သောကွောငျ့ hese သုံးအချက်များအားလုံး "သန့်စင်" ၏ဒြပ်ပေါင်းများအခွအေနေကိုကိုယ်စားပြု (Louilot et al ။ , 1986; Calcagnetti နှင့် Schechter, 1992; Crowder နှင့် Hutto, 1992; Rebec et al ။ , 1997; Bevins et al ။ , 2002) ။ ကခြယ်လှယ်များ၏မရှိခြင်းကိုကိုယ်စားပြုနေသောကြောင့်ဒီစိတ်ကူးအတွက်, အထီးကျန်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်စဉ်းစားသည် (ဆိုလိုသည်မှာ, သန့်စင်; ။ Crofton et al, ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်) ။ သို့သော်အခြား Conceptual ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ကြသည်။ တဦးတည်းသီးခြားစိတ်ကူးမှာစဉ်ဆက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အထီးကျန်အုပ်စုတစ်စုစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်သန့်စင်အုပ်စုတစ်စုထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ငါပုံမှန်သန့်စင်၏ဘာသာရပ်များမှု, ဒီမော်ဒယ် n is အမှန်တကယ်ကိုင်တွယ်။ Iဎဤကိစ္စတွင်အစားသန့်စင်အကာအကွယ်ကြောင်းပြောနေ၏, တဦးတည်းအထီးကျန်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ပေးအပ်သည်ဟုဆိုပေသည်။ ဆဲတတိယစိတ်ကူးမရှိစဉ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သန့်စင်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်နှစ်ခုအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသောထိန်းသိမ်းရေးဖြစ်ကြောင်း posits ။ ဒီအမြင်အတွက်, သန့်စင်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်ကွဲကွာနှင့်နှစ်ဦးစလုံးတစ်စုံ-သျောထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်ရပါမည်။ သန့်စင်၏သဘောသဘာဝအဖြစ်တစ်ခု universal သဘောတူညီမှု၏မရှိခြင်းပါရာဒိုင်းတစ်န့်အသတ်ကိုကိုယ်စားပြုသော်လည်း, အနာဂတ်လေ့လာမှုများအဘို့အဦးတည်ချက်ပေးသည်။ မည်သို့ပင်ဤစမ်းသပ်ချက်၏ရလဒ်များကိုမသက်ဆိုင်နောက်ဆက်တွဲအနက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရပ်တယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဘဝအတှေ့အကွုံမြားစှာသောစိတ်ရောဂါအခြေအနေများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စကားရပ်အပေါ်တစ်ဦးအားကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏အကာအကွယ်စွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ phenotypes ၏ယန္တရားကိုနားလည်ခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါသုတေသန-အမည်ရစိတ်ရောဂါအခြေအနေများလွယ်ကူစွာထိခိုက်သို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်ရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအလှူငွေအတွက်အခြေခံအကျဆုံးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအမှာစကားပြောကြား။ ဒီလေ့လာမှုကစွဲ-related အပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိအတွက်ΔFosB၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများမှာတော့ΔFosBနှင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းများနှင့်တိကျသောပစ်မှတ်မျိုးဗီဇအပေါ် inhibitory သက်ရောက်မှု၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနောက်ထပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်မော်ဒယ်အတွင်းစူးစမ်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
Yafang Zhang က, အဘယ်သူအားမျှ; အဲလစ်ဇဘက်ဂျေ Crofton, none; Dingge လီ, none; မာရိသညျကေး Lobo, none; Xiuzhen ဝါသနာရှင်, none; အဲရစ်ဂျေ Nestler, R37DA007359; သောမတ်စ်အေအစိမ်းရောင်, DA029091.
ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်ချက်အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အင်စတီကျု, DA029091 နှင့် R37DA007359 ထံမှထောက်ပံ့ငွေများကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုအားဖြင့်ထောက်ပံ့ကင်း။
Akdeniz C. , Tost အိပ်ချ်, Meyer-Lindenberg အေ (2014) ။ schizophrenia များအတွက်လူမှုရေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်များ၏ neurobiology: တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေသောသုတေသနလယ်ကွင်း။ Soc ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Psychiatric ။ Epidemiol ။ 49, 507-517 10.1007 / s00127-014-0858-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Alibhai IN, အစိမ်းရောင်က TA, Potashkin ဂျာ Nestler EJ (2007) ။ fosB နှင့် DeltafosB mRNA စကားရပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: Vivo နှင့်စသည်တို့လေ့လာမှုများ၌တည်၏။ ဦးနှောက် Res ။ 1143, 22-33 10.1016 / j.brainres.2007.01.069 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bardo MT, ဘိုးလင်း SL, Rowlett JK, Manderscheid P. , Buxton ST, Dwoskin LP (1995) ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်စိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင်စသည်တို့ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် locomotor ာင်း attenuates, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 51, 397-405 10.1016 / 0091-3057 (94) 00413-ဃ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bevins RA, Besheer ဂျေ, Palmatier MI, Jensen HC, Pickett KS, Eurek အက်စ် (2002) ။ novel-အရာဝတ္ထုရာအရပျအေးစက်: အသစ်အဆန်းဆုလာဘ်၏စကားရပ်အတွက်အမူအကျင့်များနှင့် dopaminergic ဖြစ်စဉ်များ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 129, 41-50 10.1016 / s0166-4328 (01) 00326-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘိုးလင်း SL, Bardo MT (1994) ။ Locomotor နှင့်သန့်စင်အတွက်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, လူမှုရေးနှင့်နောက်ဘက်ကြွက်ဖယ်ထုတ်ထားလိုက်တယ်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 48, 459-464 10.1016 / 0091-3057 (94) 90553-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘိုးလင်း SL, Rowlett JK, Bardo MT (1993) ။ စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ locomotor လှုပ်ရှားမှု, dopamine ပေါင်းစပ်နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏သက်ရောက်မှု။ Neuropharmacology 32, 885-893 10.1016 / 0028-3908 (93) 90144-r [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Calcagnetti DJ သမား, Schechter MD (1992) ။ နေရာအရပ်အေးစက်လူငယ်ကြွက်များတွင်လူမှုရေးအပြန်အလှန်၏အကြိုးအသှငျအပွငျဖော်ပြသည်။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 51, 667-672 10.1016 / 0031-9384 (92) 90101-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chen ကဂျေ, et al Nye သူ, Kelz ကို MB, Hiroi N. , Nakabeppu Y. , မျှော်လင့်ခြင်း BT ။ (1995) ။ electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ကင်းကုသနေဖြင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နှင့် FosB တူသောပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်း။ Mol ။ Pharmacol ။ 48, 880-889 [PubMed]
Colby CR, Whisler K. , Steffen C. , Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW (2003) ။ DeltaFosB ၏ Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 23, 2488-2493 [PubMed]
Crowder WF, Hutto CW (1992) ။ အော်ပရေတာရာအရပျအေးစက်အတိုင်းအတာနှစ်ခု nondrug စစ်ကူသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 41, 817-824 10.1016 / 0091-3057 (92) 90233-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Elisei အက်စ်, Sciarma တီ, Verdolini N. , Anastasi အက်စ် (2013) ။ ခံနိုင်ရည်နှင့်စိတ်ကျရောဂါမမှန်။ Psychiatric ။ ညု။ 25 (ပျော့ပျောင်း။ 2), S263-S267 [PubMed]
အယ်လ် Rawas R. , Thiriet N. , Lardeux V. , Jaber အမ်, Solinas အမ် (2009) ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်ဘိန်းဖြူ၏သက်ဝင်သက်ရောက်မှုများအကြိုးသော်လည်းမလျော့နည်းစေပါသည်။ Psychopharmacology (Berl) 203, 561-570 10.1007 / s00213-008-1402-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝါသနာရှင် X တို့မှာလီဃ, Lichti CF, အစိမ်းရောင်က TA (2013a) ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်ကြွက်များတွင်စူးရှသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်နျူကလိယ accumbens ၏ dynamic proteomics ။ PLoS တစ်ခုမှာ 8: e73689 10.1371 / journal.pone.0073689 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝါသနာရှင် X တို့မှာလီဃ, Zhang က Y. , အစိမ်းရောင်က TA (2013b) ။ စူးရှသောကဖိစီးမှုမှတုန့်ပြန်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သန့်စင်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်ကြွက်များတွင်နျူကလိယ accumbens ၏ differential phosphoproteome စည်းမျဉ်း။ PLoS တစ်ခုမှာ 8: e79893 10.1371 / journal.pone.0079893 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al အစိမ်းရောင်က TA, Alibhai IN, Hommel JD, Dileone RJ, Kumar ကအေ, Theobald DE ။ (2006) ။ စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးများကနျူကလိယ accumbens အတွက်သွေးဆောင်စခန်းအစောပိုင်း repressor ထုတ်ဖော် induction စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 26, 8235-8242 10.1523 / jneurosci.0880-06.2006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al အစိမ်းရောင်က TA, Alibhai IN, Roybal CN, Winstanley, CA, Theobald DE, Birnbaum စင်ကာပူဒေါ်လာ။ (2010) ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်သည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် (CREB) လှုပ်ရှားမှု binding အနိမ့်သိသိ adenosine monophosphate တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်ကကမကထပြုခဲ့တဲ့အပြုအမူ phenotype ထုတ်လုပ်သည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 67, 28-35 10.1016 / j.biopsych.2009.06.022 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al အစိမ်းရောင်က TA, Alibhai IN, Unterberg အက်စ်, Neve RL, Ghose အက်စ်, Tamminga, CA ။ (2008) ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကသူတို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာကူးယူအချက်များ (ATFs) ATF2, ATF3 နှင့် ATF4 ကိုသက်ဝင်၏ induction ။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 2025-2032 10.1523 / jneurosci.5273-07.2008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အစိမ်းရောင်က TA ကာဣန ME, Thompson ကအမ်, Bardo MT (2003) ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း-သွေးဆောင် hyperactivity လျော့နည်းစေပါသည်။ Psychopharmacology (Berl) 170, 235-241 10.1007 / s00213-003-1538-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အစိမ်းရောင်က TA, Gehrke BJ, Bardo MT (2002) ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်း: fixed- အဘို့အထိုး-တုံ့ပြန်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယား။ Psychopharmacology [(Berl) 162, 373-378 10.1007 / s00213-002-1134-y ကPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ခ, Kosofsky ခ, Hyman SE, Nestler EJ (1992) မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်နှင့်နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် binding က AP-1 ၏စည်းမျဉ်း။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 89, 5764-5768 10.1073 / pnas.89.13.5764 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
BT, Nye သူ, Kelz ကို MB, ကိုယ်ပိုင် DW, Iadarola MJ, Nakabeppu Y. , et al မျှော်လင့်ပါတယ်။ (1994) ။ နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပြောင်းလဲ Fos တူသောပရိုတိန်း၏ရေးစပ်ရှည်-တည်မြဲ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏ induction ။ အာရုံခံဆဲလျ 13, 1235-1244 10.1016 / 0896-6273 (94) 90061-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jha အက်စ်သည် Dong ခ, Sakata K. (2011) ။ ကြွယ်ဝပြည့်စုံပတ်ဝန်းကျင်ကုသမှုစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူနောက်ကြောင်းပြန်နှင့်ကမကထ IV မှတဆင့်၎င်း၏စကားရပ်ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်များ၏လျှော့ hippocampal neurogenesis နှင့်ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်ပြုပြင်။ ဘာသာပြန်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 1: e40 10.1038 / tp.2011.33 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kato တီ, Iwamoto K. (2014) ။ လူ့ဦးနှောက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအတွက်၎င်း၏ဆိုလိုအတွက်ဘက်စုံ DNA methylation နှင့် hydroxymethylation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Neuropharmacology 80, 133-139 10.1016 / j.neuropharm.2013.12.019 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kelz ကို MB, Chen ကဂျေ, Carlezon WA, Whisler K. , Gilden L. , Beckmann လေး, et al ။ (1999) ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝတရား 401, 272-276 10.1038 / 45790 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kelz ကို MB, Nestler EJ (2000) ။ deltaFosB: ရေရှည်အာရုံကြော plasticity အခြေခံတဲ့မော်လီကျူး switch သည်။ Curr ။ Opin ။ Neurol ။ 13, 715-720 10.1097 / 00019052-200012000-00017 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Sanna PP, Bloom FE (1998) ။ စွဲလမ်း၏ neuroscience ။ အာရုံခံဆဲလျ 21, 467-476 [PubMed]
et al Larson eb, ဂရေဟမ် DL, Arzaga RR, Buzin N. , ဝက်ဘ်ကဂျေ, အစိမ်းရောင်က TA ။ (2011) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် CREB ၏ Overexpression shell ကို Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်များတွင်ကင်းအားဖြည့်တိုးပွါး accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 31, 16447-16457 10.1523 / JNEUROSCI.3070-11.2011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Laviola G. အ, Hannan AJ, Macrìအက်စ်, Solinas အမ်, Jaber အမ် (2008) ။ neurodegenerative ရောဂါများနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအပေါ်သန့်စင်ပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှုများ။ Neurobiol ။ dis ။ 31, 159-168 10.1016 / j.nbd.2008.05.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lichti CF, ဝါသနာရှင် X တို့မှာ, အင်္ဂလိပ် RD, et al Zhang က Y. လီဃ, ဟောင်ကောင်အက်ဖ်။ (2014) ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်ပရိုတိန်းစကားရပ်အဖြစ်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ကင်းဖို့ proteomic တုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲ။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 8: 246 10.3389 / fnbeh.2014.00246 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lobo MK, ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့သမ္မတအိုဘားမားလွှတ်တော်မှာအက်စ်, et al Damez-Werno DM, Koo JW, Bagot RC, Dinieri ဂျာ။ (2013) ။ နာတာရှည်, pharmacological စိတ်ခံစားမှုနှင့် optogenetic လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံဆဲလျ Subtype အတွက်ΔFosBသော induction ။ ဂျေ neuroscience ။ 33, 18381-18395 10.1523 / JNEUROSCI.1875-13.2013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Louilot အေ, Le Moal အမ်ရှိမုန်အိပ်ချ် (1986) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏ differential reactivity ကိုကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်အခြေအနေများတုံ့ပြန် accumbens ။ အခမဲ့ရွေ့လျားနေသောကြွက်များတွင်တစ်ဦးအတွက် Vivo voltammetric လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 397, 395-400 10.1016 / 0006-8993 (86) 90646-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McBride WJ, Kimpel မဂ္ဂါဝပ်, Mcclintick ဖြစ်မှု, Ding ZM, Edenberg HJ, Liang တီ, et al ။ (2014) ။ ဆယ်ကျော်သက်အရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်များကမူးရူးကဲ့သို့အရက်သောက်သုံးပြီးနောက်တိုးချဲ့ amygdala အတွင်းဗီဇစကားရပ်များတွင်အပြောင်းအလဲများ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 117, 52-60 10.1016 / j.pbb.2013.12.009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mlynarik အမ်, Johansson BB, Jezova ဃ (2004) ။ ကြွယ်ဝပြည့်စုံပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုကြွက် hippocampus အတွက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အချိုမှု receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်မှ adrenocortical တုံ့ပြန်မှု။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1018, 273-280 10.1196 / annals.1296.032 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nestler EJ (2001) ။ စွဲလမ်း၏မော်လီကျူး neurobiology ။ နံနက်။ ဂျေစွဲ။ 10, 201-217 10.1080 / 105504901750532094 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nestler EJ (2008) ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ 363, 3245-3255 10.1098 / rstb.2008.0067 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nestler EJ, Barrot အမ်, ကိုယ်ပိုင် DW (2001) ။ DeltaFosB: စွဲတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 98, 11042-11046 10.1073 / pnas.191352698 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Perrotti LI, Hadeishi Y. , Ulery PG, Barrot အမ်, Monteggia L. , Duman RS, et al ။ (2004) ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ deltaFosB ၏ induction ။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 10594-10602 10.1523 / jneurosci.2542-04.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Perrotti LI, Weaver RR, Robison ခ, Renthal ဒဗလျူ, ဝင်္ဗြဲ, Yazdani အက်စ်။ (2008) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ။ synapses 62, 358-369 10.1002 / syn.20500 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အိုး KK, Vialou V. , Nestler EJ, Laviolette SR, Lehman MN, Coolen LM (2013) ။ သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခု key ကိုဖျန်ဖြေအဖြစ်ΔFosBနှင့်အတူဘုံအာရုံကြော plasticity ယန္တရားများအပေါ်ပြုမူ။ ဂျေ neuroscience ။ 33, 3434-3442 10.1523 / jneurosci.4881-12.2013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rebec GV, Christensen JR, Guerra C. , Bardo MT (1997) ။ အခမဲ့-ရွေးချယ်မှုအသစ်အဆန်းစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် Real-time dopamine efflux အတွက်ဒေသတွင်းနှင့်ယာယီကွဲပြားခြားနားမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 776, 61-67 10.1016 / s0006-8993 (97) 01004-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Robison AJ, Vialou V. , et al Mazei-Robison အမ်, Feng တို့ဂျေ, Kourrich အက်စ်, Collins ကအမ်။ (2013) ။ အမူအကျင့်များနှင့်နာတာရှည်ကင်းမှဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုΔFosBပတျသကျတဲ့ feedforward ကွင်းဆက်လိုအပ်နှင့်နျူကလိယထဲမှာကယ်လ်စီယမ် / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ကို shell ကို accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 33, 4295-4307 10.1523 / jneurosci.5192-12.2013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Smith က JK, Neill JC, Costall ခ (1997) ။ post-နို့အိုးအိမ်ခွအေနမြေားကိုကင်းနှင့် D-စိတ်ကြွဆေး၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများသြဇာလွှမ်းမိုး။ Psychopharmacology (Berl) 131, 23-33 10.1007 / s002130050261 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Solinas အမ်, Chauvet C. , Thiriet N. , အယ်လ် Rawas R. , Jaber အမ် (2008) ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ခြင်းဖြင့်ကိုကင်းစွဲ၏ပြောင်းပြန်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 105, 17145-17150 10.1073 / pnas.0806889105 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Solinas အမ်, Thiriet N. , အယ်လ် Rawas R. , Lardeux V. , Jaber အမ် (2009) ။ အသက်တာ၏အစောပိုင်းကာလတွင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်ကင်း၏, အမူအကျင့် neurochemical နှင့်မော်လီကျူးဆိုးကျိုးများလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology 34, 1102-1111 10.1038 / npp.2008.51 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လှေကား DJ သမား, Prendergast MA, Bardo MT (2011) ။ corticosterone နှင့်ကြွက်များအတွင်းစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး glucocorticoid အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး-သွေးဆောင်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Psychopharmacology (Berl) 218, 293-301 10.1007 / s00213-011-2448-4 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သီရဲလ် KJ, Pentkowski NS, Peartree NA, ပန်းချီဆရာ MR, Neisewander JL (2010) ။ အတင်းအကျပ် abstinence စဉ်အတွင်းမိတ်ဆက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလူနေမှုအခြေအနေများကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူနှင့် Fos ပရိုတိန်းစကားရပ်ပြောင်းလဲပစ်။ neuroscience 171, 1187-1196 10.1016 / j.neuroscience.2010.10.001 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သီရဲလ် KJ, Sanabria အက်ဖ်, Pentkowski NS, Neisewander JL (2009) ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏ anti-တဏှာဆိုးကျိုးများ။ int ။ ဂျေ Neuropsychopharmacol ။ 12, 1151-1156 10.1017 / s1461145709990472 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန် Winkel အမ်, Peeters အက်ဖ်, ဗန် Winkel et al R. , Kenis G. အ, Collip ဃ, Geschwind N. ။ (2014) ။ ပွားပြီးမျိုးရိုးဗီဇ-ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်၏ extension ကို: လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု sensitivity ကိုနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှုများကြားခံသက်ရောက်မှုအပေါ် BDNF မျိုးရိုးဗီဇအတွက်အပြောင်းအလဲ၏သက်ရောက်မှု။ အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol ။ 24, 930-938 10.1016 / j.euroneuro.2014.02.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Venebra-Muñozအေ, Corona-Morales အေ, စန်တီယာဂို-Garcia ဂျေ, Melgarejo-Gutierrez အမ်, Caba အမ်, Garcia-Garcia အက်ဖ် (2014) ။ ကြွယ်ဝပြည့်စုံပတ်ဝန်းကျင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuates နှင့်ကြွက် prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်သည်။ Neuroreport 25, 694-698 10.1097 / wnr.0000000000000157 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vialou V. , Robison AJ, Laplant QC, Covington သူ, Dietz DM, Ohnishi yn, et al ။ (2010) ။ ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက် DeltaFosB စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates ။ နတ်။ neuroscience ။ 13, 745-752 10.1038 / nn.2551 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wallace DL, Vialou V. , Rios L. , et al Carl-Florence TL, Chakravarty အက်စ်, Kumar ကအေ။ (2008) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် DeltaFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကသဘာဝဆုလာဘ်-related အပြုအမူအပေါ် accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 10272-10277 10.1523 / jneurosci.1531-08.2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် Y. , Cesena TI, Ohnishi Y. , et al ဘာဂါ-Caplan R. , Lam V. , Kirchhoff PD ။ (2012) ။ အသေးစားမော်လီကျူးစိစစ်ရေးကိုကူးယူအချက်ΔFosB၏အားပြိုင်မှုသတ်မှတ်။ ACS Chem ။ neuroscience ။ 3, 546-556 10.1021 / cn3000235 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Werme အမ်, Messer C. , Olson L. , Gilden L. , Thorén P. , Nestler EJ, et al ။ (2002) ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ဘီးပြေးထိန်းညှိ။ ဂျေ neuroscience ။ 22, 8133-8138 [PubMed]
Winstanley, CA, Bachtell RK, Theobald DE, Laali အက်စ်, အစိမ်းရောင်က TA, Kumar ကအေ, et al ။ (2009a) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းတိုးလာ Impulse: အ orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ Cereb ။ cortex 19, 435-444 10.1093 / cercor / bhn094 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Winstanley, CA, အစိမ်းရောင်က TA, Theobald DE, Renthal ဒဗလျူ, LaPlant ဆိုးကျိုး, DiLeone RJ, et al ။ (2009b) ။ orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB သော induction ကိုကင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု attenuating ရှိနေသော်လည်း locomotor ာင်း potentiates ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 93, 278-284 10.1016 / j.pbb.2008.12.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Winstanley, CA, LaPlant ဆိုးကျိုး, Theobald DE, အစိမ်းရောင်က TA, Bachtell RK, Perrotti LI, et al ။ (2007) ။ orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB သော induction ကင်း-သွေးဆောင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသည်းခံစိတ် mediates ။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 10497-10507 10.1523 / jneurosci.2566-07.2007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (1998) ။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏မူးယစ်ဆေး-activation ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 51, 13-22 10.1016 / s0376-8716 (98) 00063-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]